Koorsadan, waxaan ku baran doonaa xirfadaha Jarmalka, ardayda qaaliga ah. Maxay ku kala duwan yihiin xirfadaha Jarmalka iyo xirfadaha Turkiga, sidee u dhahnaa xirfadeena Jarmalka, weedho ku saabsan xirfada Jarmalka, sidee ku weydiin karnaa qofka naga horreeya xirfadooda, xukunka in la weydiiyo xirfad Jarmal iyo arrimaha noocaas ah .
Ugu horreyntii, aan dhahno adeegsiyo kala duwan ayaa lagu arkaa xirfadaha Jarmalka iyadoo loo eegayo jinsiga qofka xirfadda sameynaya. Markaa haddii macallinku lab yahay, erey kale ayaa lagu dhahaa Jarmal, erey kalena waxaa la dhahaa haweeneey. Intaas waxaa sii dheer, der artikeli waxaa loo adeegsadaa ragga hortooda, waxaana loo dhintaa articel dumarka hortooda.
Kadib markaan dib u eegay shaxda hoose By xirfad JarmalWaxaad heli doontaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan r.
Maxaa ku yaal bogga intiisa kale?
Mawduucan, oo loo yaqaan xirfadaha Jarmalka, waa mowduuc aad u ballaadhan oo ay taageerayaan tusaalooyin badan Waxaa si taxaddar leh u diyaariyay kooxda almancax. Xirfadaha Jarmalka waxaa badanaa lagu bartaa fasalka 9aad, mararka qaarkood sidoo kale ardayda fasalka 10aad. Boggan, waxaan marka hore ku baran doonnaa magacyada shaqooyinka Jarmal. Mar dambe Oraahda shaqada weyddiista ee Jarmalka waan baran doonaa. Mar dambe Weedho erayo Jarmal ah waan baran doonaa. Markaa waxaan arki doonnaa mihnadaha Jarmal si wadajir ah oo sawirro leh. Si taxadar leh u fiiri sawirada cajiibka ah ee aan kuu diyaarinay.
Xirfadaha Jarmalka Haddii aan si kooban uga hadalno iyo Xirfadaha Jarmalka la Xirfadaha Turkiga Haddii aan ka hadalno qaar ka mid ah farqiga u dhexeeya, waxaan si kooban ugu soo koobi karnaa dhawr shey.
Ma jiro farqi u dhexeeya lab ama dheddig af Turki markii la dhahayo qof shaqadiisa. Tusaale ahaan, waxaan ugu yeernaa nin macalin ah macallin, haweenka macallinka ahna macallin.. Sidoo kale, waxaan ugu yeernaa dhakhtarka ragga dhakhtarka, iyo dhakhtarka dumarka ah, dhakhtar. Sidoo kale, waxaan ugu yeernaa nin qareen ah garyaqaan, iyo garyaqaan dumar ah, garyaqaan. Tusaalooyinkaan waa la sii kordhin karaa. Si kastaba ha noqotee, tani maaha kiiska Jarmalka, Ragga ku xeel-dheer xirfad-yaqaan waxaa lagu magacaabaa eray ka duwan, kan yaqaan waxaa lagu magacaabaa erey ka duwan. Tusaale ahaan, nin macalin ah oo Jarmal ah “macallinka"Ayaa la yiraahdaa. Gabadha macallinka ah, “macallinka"Ayaa la yiraahdaa. Ardayda labka ah “arday"Waxaa la yiraahdaa, gabadh ardayad ah"arday"Ayaa la yiraahdaa. Waa suurtagal in la kordhiyo tusaalooyinkan xitaa in ka badan. Waxa ay tahay inaadan iloobin waa inuu jiro farqi u dhexeeya ragga iyo dumarka magacyada shaqo Jarmal.
Magacyada shaqooyinka Jarmalka, dhamaadka magacyada shaqooyinka ragga badanaa waa -in Keenista dahabka, magacyada xirfadaha dumarka ayaa la abuuray. Tusaale ahaan, nin macalin ah macallinka halka haweeney macallin ah "macallinka"Ereyga"macallinkaEreyga -in waa qaabka dahabka. Arday lab ahardayHalka "arday arday ah"arday"Ereyga"ardayWaa qaab ereyga "kaas oo leh dahab. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka barato waxa ay yihiin dahabku iyo sida laysugu xiro ficillada, waxaa jira mawduucyo ku yaal bartayada.
Qodobka magacyada shaqo ee loo isticmaalo ragga "ka"Waa maqaal. Qodobka ku saabsan magacyada shaqo ee loo isticmaalo dumarka waa:ka"Waa maqaal. Tusaale ahaan: der Student - ku dhinta ardayga
Haa asxaabta qaaliga ah, Xirfadaha Jarmalka Waxaan siinay xoogaa macluumaad guud ah oo muhiim ah.
Aan ku aragno mihnadaha Jarmalka liiska. Dabcan, aan ku xasuusinno inaadan ku siin karin dhammaan xirfadaha Jarmal halkan hal bog. Boggan, waxaan kaliya ku qori doonnaa magacyada xirfadleyda Jarmalka ee inta badan la isticmaalo ama inta badan ku xiran iyo macnahooda Turkiga. Haddii aad rabto, waxaad ka baran kartaa xirfadaha aan ku jirin liiska halkan, qaamuusyada Jarmalka.
Muxaadaradeena cinwaankeedu yahay xirfadaha Jarmalka waxay inta badan ku saleysan tahay xifdinta, marxaladda ugu horeysa, ku xafidida Jarmalka xirfadaha ugu badan ee nolol maalmeedka loo isticmaalo isla markaana adeegso xirfadahan Jarmalka ah ee jumladaha iyadoo la baarayo casharradeena dejinta jumladaha, si wadajir ah u baranno xirfadaha Jarmalka. Sababta oo ah, sidaan soo sheegnay, Jarmalka, ragga iyo dumarka leh xirfado badan ayaa loogu magac daray si kala duwan.Tusaale ahaan, macallinka ragga iyo macallinka dumarku way kala duwan yihiin
Hoos waxaa ku qoran magacyada xirfadaha jarmalka ugu badan ee loogu talagalay rag iyo dumar labadaba.
Dabcan, suurtagal maaha in la qoro dhammaan xirfadaha gebi ahaanba. Waxaan ku taxnay xirfadaha ugu isticmaalka badan iyo kuwa la soo kulmay nolol maalmeedka.
U dir xirfadaha Jarmalka ee aad rabto inaad ku darto, oo aan ku darno jadwalka hoose.
der Soldat u dhintaan Soldatin askari
der Koch geeriyooday cuntokariyihii
der Rechtsanwalt dhiman Rechtsanwältin garyaqaan
der Friseur Dhimasho Jir Berber, timajare
der Informatiker ku dhinta Informatikerin Injineernimada kombuyuutarka
der Bauer dhiman Bäuerin beeralay
der Arzt u dhintey Errtin dhakhtarkaaga
der Apotheker Dhimashada Apothekerin farmashiistaha
der Hausmann dhimasho Hausfrau Xannaaneeyaha, guriga guriga
der Kellner dhiman Kellnerin Garson
joornaaliiste dhiman Saxafi wariye
der Richter dhimasho Richterin xaakin
der Geschäftsmann dhinto Geschäftsfrau Ninka ganacsiga
der Feuerwehrmann u dhintey Feuerwehrfrau dab damiye
der Metzger u dhintee Metzgerin hilibka lagu qalo
der Beamter ku dhinta Beamtin sarkaal
der Friseur dhimasho Friseurin jaraha
der Architekt dhinto Architektin dhise
der Ingenieur dhinto ingenieurin injineer
der Musiker dhimasho Musikerin muusikiiste
der Schauspieler dhinto Schauspielerin Oyuncu
der Student ku dhinta ardayga Arday (jaamacad)
der Schüler geerida Schülerin Ardayda (dugsiga sare)
der Lehrer Lehrerin macallinka
der Chef u dhintaa Chefin Tababaraha kooxda
der Pilot dhintey Pilotin Pilot
der Polizist geeri Polizistin booliiska
siyaasiyiin u dhintaan siyaasi siyaasi
der Maler Malerin u dhinto rinjiile
der Saatsanwalt Dhimashadaa xeer ilaaliyaha guud
der Fahrer dhiman Fahrerin wadaha
der Dolmetscher dhinto Dolmetscherin turjubaan
der Schneider Schneiderin seamstress
der Kauffmann ku dhinta Kauffrau Ganacsade, ganacsade
der Tierarzt der Tierarztin xoolaha
der Schriftsteller dhinto Schriftstellerin qoraa
Xagga sare, magaca ugu badan ee loo adeegsado Jarmalka ee ragga iyo dumarkaba waxay ku qoran yihiin.
Waxaa jira kala duwanaansho lab / dheddig ah oo Jarmal ah oo loogu talagalay xirfado badan, sida hoos ka muuqata. Tusaale ahaan, haddii macallinku yahay lab, erayga "Lehrer" ayaa la adeegsadaa,
Ereyga "Lehrerin" waxaa loo isticmaalay gabadha macallinka ah. Ereyga "Schüler" waxaa loo isticmaalaa ardayda labka ah iyo "Schülerin" ee ardayda ardayda ah. Sida la arki karo, magaca shaqada ee ay tahay in loo isticmaalo dumarka waxaa lagu helaa iyada oo lagu daro -in dhamaadka magacyada shaqo ee loo isticmaalo ragga. Tani badanaa waa kiiska.
Dhanka kale, aan u qeexno waxyaabaha soo socda kooxda almancax; Suurtagal ma ahan in la bixiyo dhammaan xirfadaha ku yaal boggan, ereyada tusaalaha ah ee aan bixinno waxaa lagu xushay iyada oo lagu saleynayo ereyada ugu isticmaalka badan uguna badan nolosha maalinlaha ah. Si aad u barato Jarmalka xirfadaha aan laga heli karin halkan, waxaad u baahan tahay inaad hubiso qaamuuska. Waxaad kaloo ubaahantahay inaad qaamuuska ka barato jamacadaha ereyadan.
Jarmal ahaan, qodobka magacyada shaqooyinka oo dhan waa “der” Tani waxay khuseysaa magacyada shaqada ee loo isticmaalo ragga.
Qodobka loogu talagalay magacyada shaqo ee loo isticmaalo dumarka waa "dhinta". Guud ahaan, qodobbada looma isticmaalo xukunka ka hor magacyada shaqada.
Shuruudaha la Xiriira Xirfadaha Jarmalka
1. Qaybaha Weydiinta Xirfadaha Jarmalka
Jumladaha shaqa doonka ah ee Jarmalku waa kuwan soo socda. Haddii aan rabno inaan qofka kale wax ka weydiino xirfadiisa Was bist du von Beruf Waxaan weydiisan karnaa xirfadaada adoo dhahaya ama hadaan rabno Was ist dein Beruf Waxaan weydiin karnaa qof kale xirfadiisa jarmalka. Weedhan "waa maxay xirfaddaadu","waa maxay shaqadaadu","maxaad qabataaWaxaa loola jeedaa sida ”.
2. Qodobbada Xirfadaha Jarmalka
Hoos ka eeg jumladaha tusaalaha ah. Hadda waxaan siin doonnaa tusaalooyin weedho xirfadeed Jarmal ah. Aynu marka hore tusaale u soo qaadanno jumlado dhawr muuqaal leh. Ka dib, aan ku celcelinno jumladaheenna tusaalaha ah liistada. Fadlan si taxaddar leh u baar. Waxaan u isticmaali doonnaa qaabka Mawduuca + Kaaliyaha Verb + Magaca, oo aan hoos ku soo xusnay, halkan iyo mowduucyadeena mustaqbalka. Waxaan ku siin karnaa 2 tusaale oo kala duwan sida bayaan xirfadeed Jarmal ah. (Xusuusin: waxaa jira noocyo badan oo kala duwan iyo jumlado dheeri ah oo ku yaal bogga hoose)
Waxaan ahay macalin
Tusaale labaad xukun
Mihnadaydu waa dhakhtar (waxaan ahay dhakhtar)
Weedho ay ka mid yihiin "Anigu waxaan ahay Ahmet, anigu waxaan ahay macallin" marwalba waxaa lagu sameeyaa qaab isku mid ah. Waxaan soo sheegnay in magacyada shaqooyinka ragga ay yihiin der, iyo magacyada shaqooyinka haweenka ay dhintaan. Si kastaba ha noqotee, weedho ay ka mid yihiin "Anigu waxaan ahay macallin, waxaan ahay dhakhtar, waxaan ahay shaqaale", maqaal inta badan lama hor dhigo magacyada shaqada. Sidoo kale, maadaama aan ula jeedno wax kabadan hal qof (jamac) markaan dhahno "anaga", "adiga" iyo "iyaga" weedho sida "waxaan nahay macalimiin, waxaad tihiin arday, waxay yihiin dhakhaatiir", weedhahan qaab jamac ah magaca xirfadlaha ayaa la adeegsadaa. Hadda aan u gudubno tusaalooyinkeenna oo leh muuqaallo waawayn oo aan kuu diyaarinay adiga oo ah kooxda almancax.
Oraahda xirfadda Jarmalka
Ich bin Pilot: Waxaan ahay tijaabo (bay)
Ich bin Lehrerin: Waxaan ahay macalin (gabadh)
Duwaha Lehrer: Adiga (macalinkaaga)
Ich bin Metzgerin: Anigu waxaan ahay tuugada (gabadha)
Ich bin Friseur: Anigu waxaan ahay barbaro (bay)
Jarmalka Shaqo Sawirada
Saaxiibbada qaaliga ah, waxaan hadda soo bandhigeynaa qaar ka mid ah xirfadaha Jarmalka oo leh sawirro.
Adeegsiga muuqaalka duruusta ayaa kaalin ka qaadanaysa fahamka ardayda ee maadada iyo maadada oo si fiican loo xasuusto loona xafido. Sababtaas awgeed, fadlan ka fiiri sawirkayaga xirfadaha Jarmalka hoosta. Suufiyeyaasha ku dheggan erayada sawirka hoose waxay muujinayaan qaabka ereyga jamac ahaan.
Xeerar badan oo Muunado ah oo ku saabsan Xirfadaha Jarmalka
Sind Sie von Beruf ma ahaa?
Waa maxay shaqadaadu?
Ich bin Arday.
Waxaan ahay macalin (macalin macalin)
Waxaan ahay macalin (macallimad haween ah)
Waxaan ahay kabalyeeri (adeegto)
Waxaan ahay cunto kariye. (mr kariye)
Hadda aan tusaalo siinno adoo adeegsanaya dhinac saddexaad.
Beytullah waa arday.
Kadriye waa macalin.
Meryem waa duuliye.
Mustafa waa dawaarle.
Aabbahay waa wade.
Hooyaday waa darawal.
Saaxiibbada qaaliga ahow, Xirfadaha Jarmalka Waxaan u nimid dhamaadka mowduuca la magacaabay. Xirfadaha Jarmalka Marka laga hadlayo magacyada mihnada jarmalka, qofka kale wax laga waydiinayo xirfadahooda oo anaga ayaa naloo faray "waa maxay xirfaddaaduWaxaan baranay inaan ka jawaabno su'aasha. Waxaan sidoo kale baranay inaan sheegno waxa ay yihiin xirfadaha dhinacyada saddexaad.
Xirfadaha Jarmalka Waxaad ku qori kartaa meelaha aadan ka fahmin mawduuca meesha su'aalaha ku taal hoosta.
Intaa waxaa dheer, haddii aad meel ku leedahay maskaxdaada, waxaad weydiin kartaa su'aalahaaga goobta su'aalaha, waxaad sidoo kale qori kartaa dhammaan fikradahaaga, soo-jeedimahaaga iyo dhaliishaada ku saabsan xirfadaha Jarmalka.
Bartayada iyo Casharradeena Jarmalka Ha iloobin inaad kula talisid asxaabtaada oo aad la wadaagto casharradeena facebook, whatsap, twitter.
Waxaan kaaga mahadcelineynaa xiisaha aad u leedahay bartayada iyo casharradeena jarmalka waxaanan kuu rajeyneynaa inaad ku guuleysato casharradaada Jarmalka
Waad weydiisan kartaa wax kasta oo aad rabto inaad weydiiso xirfad jarmal ah sida xubin ka mid ah golahayaga Jarmalka, waxaad ka heli kartaa caawimaad ka socota tababareyaashayada ama xubnaha kale ee golaha.
Waxaan rajeyneynaa guulo sarre.
Tags: Shaqooyinka Jarmalka, xirfad jarmal ah, Magacyada xirfadaha Jarmalka, Magacyada xirfadaha Jarmalka, weydiinta xirfadlaha, ha dhihin xirfad jarmal ah, xirfadaha german, xirfadlayaasha, xirfadaha xirfadaha, ee xirfadaha